Filannoon sobaa, Saba Oromoo bakka hin bu’u - Independent Oromia
• Uummata Oromoo Bal’aaf
• Miidiyaalee Oromoo Hundaaf
• Firoottan Oromoo Hundaaf
Dhimma: Oromoon, Sirna Nafxanyaa Oromiyaa irratti ijaaruuf filannoo geggeefamu irraa hirmaachuu hin qabu!
Nuti, miseensonni Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-Addunyaa (Oromia Global Forum), Uummanni Oromoo filannoo sobaa, filannoo sirna gita bittuu-nafxanyaa uummata keenya irratti deebisanii ijaaruuf godhamu irratti sabni keenya akka hin hirmaanne waamicha lammummaa fi obbolummaa dhiheessina.
Filannoon kun dorgommii nafxanyoota jidduutti godhamaa jiru malee filannoo sabaaf sab-lammoonni Imapaayera Itoophiyaa keessa jiran keessatti hirmaatan miti. Kanaafuu, Oromoon filannoo sobaa kana’rraa qooda fudhachuun, Oromummaa fi Oromiyaa irrati murtii du’aa dabarsuu dha.
Uummanni Oromoo waanjoo gabrummaa ofirraa darbuuf bara dheeraaf qabsoo hadhooftuu godhee wareegama ulfaataa baasaa as-gahuun isaa addunyaa irraa dhokataa miti. Keessattuu, bara 2014-2018 ilmaan qaqqaalii kumaatamaan itti wareegee mootummaa cunqursaa EPRDF sabaaf sab-lammoota irraa buqqisee TPLFn maqaleetti erga galcheen booda abdii guddaa horatee ture. Haa ta’u malee OPDOn TPLF waliin saba keenya miidhaa turte Nuti TPLF'n dirqamne malee saba keenya hin miinu jechuun afaan mi’eeffattee injifannoo saba keenyaa jalaa buttee diinaaf (nafxanyaaf) kennite. Gaaffii sabni Oromoo bara dheeraaf gaafataa ture tokkollee otuu hin deebisin, akkuma bara TPLF, ammallee Oromoo diina godhattee leelliftoota sirna nafxanyaa fira taasifachuudhaan, waggoota sadan darban miidhaa hamaa saba keenyarraan gahaa turte; har'as gahaa jirti. Akkuma Oromoo waggoota kuma dudduubatti hanbifna jedhan, filannoo Oromoon keessatti hin hirmaanne qopheeffachuun Oromoo waanjoo garbummaa isa dhumaa jala galchuuf karoorfatanii halkaniif guyyaa hojjiitti jiru.
Dhaabolii Oromoo bilisa ta’an ABO fi KFO irratti duulanii maqaa adda addaa itti maxxansuun siyaasa biyyattii keessaa ala taasisuuf yaalii guddaa godhaniiru, godhaas jiru. Kana keessaa inni mul'ataan beekamu, hoogganoota Oromoo kanneen akka: Abdii Raggaasaa, Kol. Gammachuu Ayyaanaa, Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Mikaa’eel Booranaa, Hamzaa Adaanee, Kennasaa Ayyaanaa fi kan kumaatamaan lakkaahaman, badii tokko malee maqaa xureessuun mana hidhaatti guuruun dararaa hamaa irraan gahaa jiru. Warra hafanimmoo mana keessatti ugguranii dhiibbaa adda addaa irraan gahaa jiru.
Dhaaboliin bilisa ta’an mirga abbaa biyyummaa keetiif falman ABO fi KFO'n akka filannoo kana irratti hin hirmaanne dhiibanii tapha siyaasaa keessaa ala taasisuun akka ati carraa jara filachuu hin arganne si godhaniiru. Karaa biraatiin garuu dhaabolii siyaasaa nafxanyaaf haala mijeessanii akka isaan hanqina tokko malee filannoo kana irratti hirmaataa jiran atuu argaa jirta. Fakkeenyaaf waltajjii marii morkattootaa jedhanu irratti akka Oromoon qooda hin fudhanne godhamee atuu argaa jirta.
Filannoon dhaaboliin Oromoo bilisa ta’an ABO fi KFO'n keessatti hin hirmaanne, akka nafxanyaan aangoo dhuunfattu taasisa. Nafxanyaan aangoo dhuunfachuun ammoo, Oromiyaa fi Oromoo irratti miidhaa heddu fiduuf deema:
Heera (Constitution) biyyattii balleesuun mirga sabaaf sab-lammootaa raggaasifame guutummaa-guutuutti haquun akkuma bara Minilik Afaan Amaaraa dubbachuu, amantii tokko hordofuu dirqiii taasisa.
Oromoon afaan isaatiif aadaa isaa akka hin shaakalle, akka hin guddifnee fi hin babal'ifanne akkuma bara nafxanyoota darbanii afaankeetiin mana murtii fi waajjira mootummaatti tajaajila argachuu dhabda.
Oromiyaan akka biyyaatti maappii (kaartaa) biyyoolessaa irraa haqamtee nafxanyaan akka isaaf ta’utti impaayera ijaarrata.
Finfinneen Amaara qofaan dhuunfatamtee Oromoo ta’anii Finfinnee keessa jiraachuun yakka ta’a.
Seera adda addaa baasuun lafaaf qe’ee keerraa si buqqisuun firoota isaanii Goojjamiif Gondorii fidaniii lafa kee irra qubachiisan; Abbaa biyyummaa kee haqan.
Walumaagalatti, kaayyoon jaraa inni dhumaa, duula Oromummaa, mallattoo eenyummaa keetii, irrati banan seeraan impaayerattii guutuu keessatti yakka gochuun lafa addunyaa irraa haquu dha.
Waltajjiin Marii Oromiaa Idil-Addunyaa, filannoo sobaa kan sabni Oromoo irraa ugguramee xafxanayaan qofti Oromiyaa dhuunfachuuf irratti wal-dorgomtu hadheeffatee balaaleffachaa, uummanni keenya filannoo sobaa kana irratti hirmaachuudhaan nafxanyoota akka ofirratti hin aangomsine waamicha goona. Filannoon dirqiin ta’u hin jiru. Lammiileen Oromiyaa hundi, wamicha keenya kana hordofuudhaan / fudhachuudhaan filannoo sobaa, kan Oromummaa, eenyummaa keenya baleessuu irratti xiyyaafatee nafxanyootaan deemaa jiru kanarratti akka qooda hin fudhane irra-deddeebinee waamicha keenya dabarsina. Mootummoonni addunyaa, filannoon Abiyyi fi nafxanyoonni gaggeessuuf deeman, filannoo kijibaa ta’uu ragaa bahuudhaan filannoon kun seera-qabeessa miti, dimokraatawaa miti, ulaagaa filannoo adduunya hin guutu jechuun harkatti kuffisanii jiru. Lammiileen Oromiyaa’llee dhugaa addunyaan hubatte tana hubachuudhaan, filannoo sobaa irraa qooda fudhachuu dhiisuun, qabsoo haqaa, qabsoo bilisummaa, qabsoo abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuuf, karoora Abiyyi fi nafxanyootaa akka fashaleessan waamicha goona.
Walatajii Marii Oromiyaa Idil-Addunyaa